Eyona unobangela iimpazamo sincanyathiselwe umsebenzi owodwa umshini CNC
ixesha Post: Aug-10-2018
Unobangela omkhulu iimpazamo sincanyathiselwe umsebenzi lathe CNC oyena nobangela iimpazamo sincanyathiselwe ngokusebenza CNC lathes kukuba ngendlela yokuvelisa kwicandelo sincanyathiselwe ngamnye eziphakamileyo, ukuchaneka yokufaka eziphakamileyo, kwaye banxibe wento ngexesha ukusetyenziswa lubekwa. Lwemidlalo erro ...Funda ngaphezulu »
CNC isondlo lathe inkqubo feed servo ingxaki
1.1 Overtravel Xa isindululo umxhesho lugqithe ngaphaya umda software ebekwe yi-software okanye umda iintsimbi ezimiselwe yi-iswitshi umda, i alamu overtravel kuya kwenzeka, yaye isiqulatho alarm ziya kuboniswa kwi CRT. Ngokutsho CNC kwinkqubo manual, iphutha lupheliswe. Uphakamise ...Funda ngaphezulu »
iimpazamo eziqhelekileyo kwinkqubo servo centre machining CNC
iimpazamo eziqhelekileyo CNC kwinkqubo servo iziko machining Njengoko sonke sisazi, inkqubo machining iziko servo na inkqubo ebonelela ngamandla isixhobo kumatshini. Ngaphandle iziko machining inkqubo servo, lo workpiece azinako ukuba zingenziwa. Ngoko ke, inkqubo servo ibaluleke kakhulu ce machining ...Funda ngaphezulu »
Ngaba machining kwamalungu zentsimbi kwi CNC iziko machining elungileyo okanye nzima?
Okokuqala, lo machining of izahlulo zentsimbi kumaziko machining CNC kubalungele yimiqolo nzima okanye emihle komzila. iindawo nentsimbi workpieces eqhelekileyo kakhulu. abathengi abaninzi baya kucela ukuba iziko machining alisetyenziswa kwiziko machining ukwenza iindawo zentsimbi. Ingaba i "machining iziko Cnc ...Funda ngaphezulu »
Yintoni na chuck ongenawo CNC iziko machining?
1. Yintoni CNC ongenawo chuck? iikomityi udoti sokufunxa, okwabizwa ngokuba spreaders lwepolitiki, ungomnye actuators cleaner. Ngokubanzi, ukusetyenziswa ongenawo chucks ukuba ingaxuthi amanqaku yenye yeendlela ibiza kancinane. chucks Sivula ziyafumaneka banezimbo. iikomityi sokufunxa eyenziwe irabha angaba ...Funda ngaphezulu »
Idilesi: 1022, Ukwakha 1, Elegant Commercial Plaza, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu kwiPhondo China